ICHITHE IZINSOLO ZENKOHLAKALO I-ELANGENI COLLEGE – Sivubela intuthuko Newspaper
By admin	 Last updated Mar 13, 2020 154
Esithombeni: UMnu Nhlanhla Mpondi onguSihlalo wesigungu sase kolishi i-Elangeni TVET College ngesikhathi echazela abezindaba ngokwenzeka ezikhungweni zabo.
I-Elangeni TVET College iyaphikisana nezinsolo ezikhishwe inyunyani yabasebenzi i-National Education Health and Allied Worker’s Union (NEHAWU) esitatimendeni sayo sakamuva ebisola lesi sikhungo ngokuba nesandla ekulahlekeni kwesi-R1.8 million nosekudale uthuthuva emagatsheni alesi sikhungo ngabafundi bebhikisha.
Amalunga ebhodi lase Elangeni College libe selibiza asithangami nabezindaba emahhovisi abo amakhulu ePinetown ukuzocacisa ngokwenzeka kuleli kolishi. UMnu Nhlanhla Mpondi onguSihlalo wesigungu sakuleli kolishi utshele abezindaba ukuthi lokhu okwenzekile akusiyona into entsha njengoba kwaziwa ukuthi izinga lobugebengu liphezulu lapha eNingizimu Afrika ngakho-ke lesi sikhungo sigqekezelwe kwathathwa isamba semali kanye namakhompyutha njengakwezinye izindawo okuke kwenzeke okufanayo.
“Akukho okuningi esingakusho ngokugqekezelwa ngoba kuyinto eyenzekalayo noma yikuphi kanti nathi njengoba silahlekelwe nje silivulile icala esisalilandela ukuthi lizogcinaphi njengoba amaphoyisa esaluphenya,” kuchaza uMpondi. “Abafundi sihlalile nabo phansi sabachazela ngokwenzeka esikoleni saphinde sabacela ukuba behlise imimoya. Sibacacisle ukuthi akukho okuthinta imali yabo ka-NSFAS njengoba bese kusolwa ukuthi iyona le elahlekile. Njengabazali nathi siyazwelana nezitshudeni ezingakayitholi imali ka-NSFAS futhi sisazama amaqhinga okuthi bagcine beyitholile,” kuqhuba uMpondi.
UMnu Nhlanhla Ngubane naye oyilungu lebhodi uthe abafundi abangazitholile izimali zabo eziphuma kwa-NSFAS yilabo abangaphumelelanga kahle kwezinye zezifundo zabo ngoba le mali vele akabe esayithola umuntu ongenzi kahle ezifundweni zakhe. “Imali ka-NSFAS ayihlangene nhlobo nekolishi, akulona ikolishi elinikeza abafundi imali kodwa u-NSFAS uyaxhumana nabafundi mathupha kube yiwona futhi othumelela abafundi imali,” kuqhuba uNgubane
UMnu Mfundo Tango oyilungu lalesi sigungu wengeze ngokuthi okumele bakwazi abantu ukuthi banayo impela imvumo yokuthola ulwazi ngokwenzekalayo ngemali yabo njengoba lemali iyimali yabakhokhi bentela. “Akukho esikusabayo ngophenyo olwenziwayo, ukulahleka kwamakhompyutha akuchazi ukuthi kukhona ubufakazi esibufihlayo ngoba lawo makhompyutha konke okukuwona sisenakho kuqoshiwe konke ngakuthina,” kuchaza uTango.